Wasaaradda Amniga Puntland oo sheegtay in shirar dowladda lid ku ah aan lagu qaban karin gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasaaradda Amniga Puntland oo sheegtay in shirar dowladda lid ku ah aan lagu qaban karin gudaha Puntland
September 10, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Shir dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Garoowe oo lagu dhaliilay hanaanka xukuumada hadda jirta.
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda Amniga Puntland ayaa soo saartay amar lagu mamnuucayo in shirar dowladda lid ku ah lagu qaban karin gudaha magaalooyinka Puntland.
“Iyadoo ay maalmahan la qabanayey shirar qarsoodi ah oo liddi ku ah xasiloonida iyo nabad gelyada shacabka Puntland, waxaa la farayaa dhammaan laamaha ay warqadani sida tooska ah ugu socoto inaan la qaban karin wax shirar siyaasadeed ah oo lagu khalkhal galinayo amniga Puntland,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Wasaaradda Amniga Puntland shalay oo Sabti ahayd.
“Ciddii u hoggaansami weyda sharciga, waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan.” Ayaa lagu sii yiri bayaanka.
Bayaanka ayaa daba socday kulamo ka dhacay gudaha magaalada Garoowe oo lagu dhaliilay waxqabadka xukuumada Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali.
Dhanka kale, Cali Xaaji Warsame oo soo noqday Wasiirka Waxbarashada Puntland iyo musgarax madaxweynaha Puntland ayaa ku tilmaamay go’aanka Wasaaradda Amniga mid sharci daro ah oo kasoo horjeeda dastuurka Soomaaliya iyo kan Puntland.
“Waa sharci-darro warqadaasi, waxayna ka soo horjeedaa dastuurka Soomaaliya iyo kan Puntland, waxayna meel-ka-dhac ku tahay bulsho weynta Puntland iyo xaquuqda mawaadinka dastuurku ilaaliyey,” ayuu ku yiri qoraal boggiisa rasmiga ah ee Facebook-ka soo dhigay Xali Xaaji.
“Sow ayaan-darro maaha in dowlad ku doodeysa in ay diyaar u tahay nidaamka xisbiyada badan ee dastuurka Puntland ku dhisan yahay ay qaado tillaabadaas caburinta ah, ee aysan reer Puntland marna u hogaansameyn.” Ayuu ku sii daray.
Ankara-(Puntland Mirror) Saddex askari oo Turki ah ayaa la dilay mid kalena waa dhaawacmay intii lagu guda jiray iskahor-imaansho dhexmaray dagaalyahanada Daacish (ISIS) oo ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya, sida ay sheegeen ciidamada Turkiga. Bayaan [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF ayaa deegaanada u dhow Garoowe ku qabtay ugu yaraan 14 xubnood oo katirsan Al-Shabaab, sida PSF ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen boggooda Facebook-ka. “Waxaa ciidamada amniga [...]